Boqolkiiiba Sodon ma dimoqraadiyad baa? | allsanaag
Boqolkiiiba Sodon ma dimoqraadiyad baa?
Boqolkiiba sodonka loo qoondeeyey in Dumarka Soomaaliyeed ka helaan baarlamaanka soo socda maaha mid Dimoqraadiyad ku salaysan iyo mid caalamka intiisa kale ka shaqeeya ee waa bahdil lagu soo xoojinaysa in Muslimiintu ay u daran yihiin Dumarkooda.
Wadamada Aduunka ku dhaqma Dimoqraadiyadda iyo doorashooyinka halka cod lagu kala badiyo waxa ka mid ah Hindiya iyo Maraykanka oo ay ku nool yihiin dad laga tiro badan yahay oo dalalkaas ku dulman, ilaa hadana kama dhicin kuraas loo qoondeeyey Dumar, dadka midabka leh iyo Harijanka aan la taaban karin ee Hindiya.
Hadaba Su’aasha mudan in lays waydiiyo sharci ahaan, ayaa waxay tahay maxaa loo cuskaday in qayb ka mid ah Bulshada loo qoondeeyo kuraas u gaar ah haddi an arintan siyaasad iyo sawir xun la doonayn in laga bixiyo Bulshada Soomaaliyeed. Beritona yeey noqon doonaan kooxda kale ee Bulshada Caalamku ay madaxda Soomaaliyeed ku amri doonaan inay kuraas uga qoondeeyaan baarlamaanka Soomaaliya.
Dumarku iyo Qof walba oo cod raadinayaa inuu olole doorasho galo oo Bulshada dooranaysa u soo gudbiyo wuxuu u qabanayo Waa dimoqraadiyadda saxda oo lagu kala saari karo dadkii wada tartamayey. Waana sababta 14 sano ee ugu danbaysay aan codkayga u siinayey qof dumar ah oo laga soo doorto xaafadda aan kaga noolahay dalkayga. Sababtoo ah markii hore waxay gashay olole xoogan oo ay albaab walba oo ay cod ka raadinaysay waa garaacday, iyada ka codsanaysa Vote ama cod . Markii ay guulaysatayna Bulshadii dooratay ayeey dib ugu soo laabatay si ay wax ugu qabato. Laakiinse tan Somaaliya maanta ka jirtao oo 30% loo qoondeeyey dumar, uuna soo xulayo Oday Buuri cabayaa waa lugooyo kale oo Soomaaliya lala damacsan yahay.
Ugu danbayntii Baarlamanka Soomaaliya inti uu soo jiray laga soo bilaabo 2000 ilaa 2016, waxa ugu metalayey mar walba qof Dumara oo reer Maakhir ah oo aqoonteeda leh, maantana haddii munaafaqnimada bulshada caalamku ay ugu khasbayaan iga daayaan iyo arinta ayna iyaguba dadlakooda ka samayn ee qoondaynta codka dad gaar ah meel loo dhigayo, waxaan soo dooran lahaa cidda aan aaminsanahay inay wax ii qabanayeen Rag iyo Dumar oo ay aqoontu hagayso.
← Bernie Sanders’ brother in bid for Cameron’s UK MP seat Khiyaanada ku qarsoon dacwadda muranka Badda Somaliya iyo Kenya →